Bacobelelane ngolwazi esithangamini | News24
Bacobelelane ngolwazi esithangamini
IZITHOMBE: THami ka-kankosiAmanye amadoda abephume ngobuningi bawo kulembizo.
INDLELA yokuziphatha nokudlala indima ebalulekile emphakathini iyo ebiseqhulwini ngesikhathi kunesithangami samadoda wodwa endaweni yakwaMachi ngoLwesihlanu olwedlule.
Umasipala woGu uhlanganise lesisithangami lapho bekuzokhulunywa ngezindaba ezithinta amadoda ngqo. Kokunye okukhulunywe ngakho indima nendlela amadoda okufanele aziphathe ngayo emphakathini kanye neqhaza okufanele libanjwe amadoda ekukhulisweni kwezingane, ikakhulukazi lezo zabafana.
Izikhulumi ngokulandelana kwazo zikubeke kwacaca ukuthi izithangami ezifana nalezi zibaluleke kakhulu, njengalokhu kuyilapho amadoda ethola khona ithuba lokukhuluma ngokukhululeka ngezingqinamba abhekana nazo.
Ngaphandle kukaMeya woGu owethule inkulumo yosuku, ezinye izikhulumi kubalwa Inkosi yesizwe sakwaMachi Kanye noMnu Sibusiso Mhlakwane, ongusihlalo wophiko olubhekelele inhlalakahle yamadoda kwisiyingi soGu.
Abebethamele lesithangami baphinde banikwa ithuba lokuba baphefumule, nalapho kugqame ngokusobala ukuthi ziningi izingqinamba ezibhekene namadoda, kodwa inkinga ukuthi noma amadoda ezibika izinkinga zawo, azinakwa muntu.
Bakhale ngokuthi bavele aphenduke inhlekisa uma ebika usizi nezingqinamba abhekana nazo.